Stranger Things ရာသီ4သတင်း: SHIELD မှအေးဂျင့်သည် star ည့်သည်တော်ကြယ် - သူစိမ်းများ
Stranger Things မှရာသီ4သတင်း - SHIELD မှသရုပ်ဆောင်၏ guest ည့်သရုပ်သရုပ်ဆောင်
သူစိမ်းများ (Netflix အတွက် Rachel Murray / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
ငါရာသီ2အစဉ်အမြဲငါရှိသည်: Netflix က Mindy Kaling ရဲ့စီးရီးသက်တမ်းတိုး Baby-Sitters Club သည်ယနေ့ည Netflix သို့လာသည်
SHIELD ၏ Agents မှ Joel Stoffer သည် Stranger Things Season4သရုပ်ဆောင်ရာတွင်ပါဝင်သည်
ထံမှယောလ Stoffer SHIELD ၏အံ့’s ခြင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ် guest ည့်သည်ကြယ်ပွင့်ပါလိမ့်မယ် သူစိမ်းများ ရာသီ 4!
ဘယ်အချိန်မှာမသတင်းလည်းမရှိပေမယ့် သူစိမ်းများ ထုတ်လုပ်မှုကိုပြန်လည်စတင်နိုင်သည်။ စတုတ္ထရာသီနှင့် ပတ်သက်၍ အသစ်သောအရာများကိုအမြဲတမ်းကြားရလေ့ရှိသည်။ သူစိမ်းများ Netflix ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးစီးရီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးနောက်လာမည့်ရာသီနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေမှုအများဆုံးပြုလုပ်ပေးသည်။
တွင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူ Stoffer Shield ၏ကိုယ်စားလှယ် 2017 ကတည်းကမကြာသေးမီကပြောကြားခဲ့သည် ComicBook.com သူ၌တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရှိပါတယ် သူစိမ်းများ ရာသီ ၄။ စတိုဖာကသူသည်မည်သည့်အခန်းကဏ္isတွင်ပါဝင်သည်ကိုမသိကြောင်း၊ ရေရှည်အတွက်ဘာဖြစ်မည်နည်း။
ဒါကြောင့်သူဘယ်လိုကစားမလဲဆိုတာကိုစောင့်နေရင်းနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကဆက်နေပါတယ်။ သူလည်းသူကဇာတ်ညွှန်းပေးသောအခါသူမြင်ကွင်းတစ်ခုအတွက်ဇာတ်ကောင်အမည်များကိုမဆိုအသိအမှတ်ပြုမပြုခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ လူသိများကြသည်မဟုတ်ကြောင်းများစွာသောဇာတ်ကောင်ရှိပါတယ်မဟုတ်ပေးထားပေးထားသောအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။
အဆိုပါ Duffer Brothers ၏ဖန်တီးသူ လူစိမ်းများ၊ ပိုပြီးကောင်းစွာ guest ည့်သည်ကြယ်များနှင့်အတူအင်တာဗျူးတွင်ရာသီ 4. အတွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်ဟုကလူသိများစေပြီ ပြီးစီးရမည့်နောက်ဆုံးအချိန် သူတို့ဟာရာသီသစ်မှာအေးမြတဲ့ stars ည့်သည်ကြယ်တွေရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။
အတိတ်ကာလကစီးရီးများသည်အချို့သောနာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်အချို့အားစီးရီးတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါဝင်ရန်စည်းရုံးခဲ့သည် Sean Austin၊ Cary Elwes၊ Paul Reiser နှင့် Matthew Modine တို့အားလုံးသည်အခန်းကဏ္ re များ၌ပြန်လည်ပါဝင်ပြီး Winona Ryder ၏ပုံဖော်ထားသည့် Joyce Byers သည်သင်တန်း၏။ လာမယ့် big ည့်သည်ကြယ်တွေပိုများလာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
သူစိမ်းများ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွမ်းဆွတ်မှုကြောင့်သူဟာနာမည်ကြီး 80s ကိုးကား, ငါတို့နှင့်အတူစိတ်ခံစားမှုတွင်ပါ ၀ င်လာသည့်ဇာတ်ကောင်များနှင့်ထူးခြားသောဇာတ်ကောင်များနှင့်အတူယူဆောင်လာသည်။ storyline ကမင်းကိုစေ့စပ်ထားတယ်၊
နောက်တစ်ခု:Stranger အရာများရာသီ4လွှတ်ပေးရက်, သွန်းနှင့်ပိုပြီး
ဗဟိုရာသီ 11 Hulu လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ
netflix အပေါ် Steve carell ရုပ်ရှင်
အဘယ်မှာရှိ deadpool စောင့်ကြည့် 2